Apple skids muIndia neiyo iPhone SE | IPhone nhau
Kwenguva yakati ikozvino, India yakava imwe yenyika huru umo Apple iri kutarisisa zvido zvayo. UyeMuIndia zvese zviri zviviri iPhone 5c uye iPhone 5s zvakatengeswa kunge hotcakes, kunyanya mushure mekudzikiswa kwaishandiswa naApple ivo vasati varega kuvatengesa vhiki mbiri isati yatanga iyo iPhone SE nyowani.
Mune dzidziso, iyo nyowani iPhone SE inoitirwa kwete chete kune nyika dzichangobuda, asi zvakare inoitirwa avo vashandisi avo tsvaga zvakakura zvishandiso zvisingaite. Asi pamutengo we iPhone SE, kunyangwe iri yakaderera pane mamwe mamodheru, haisi kuve nehanya neIndia iyo yainofanirwa kuve nayo maererano nezvakafanotaurwa naApple.
Vhiki mbiri mushure mekuburitswa kwayo zviri pamutemo, iyo nyowani iPhone SE yakakohwa yakaipisisa yekutengesa manhamba sezvo kambani inotengesa zvishandiso munyika. Sekureva kweET Tech, Apple yakangokwanisa kutengesa zviuru zviviri pakati peBangalore, Mumbai neDelhi, chishuwo chakakonzera avo vari muCupertino kuve nenzvimbo yepamusoro yechigadzirwa ichi munyika, nekuti izvo zvinotarisirwa zvekutengesa zvakazivisa dzimwe nhamba zvakanyanya kunaka yekambani.
Kutengesa muIndia, zvichisiyana nekubudirira kukuru kwakave nemuchina uyu muUnited States nedzimwe nyika dzeEurope uko maApple Stores akakurumidza kupererwa neiyo yakafanana. Apple haisati yatanga kutenderera kwezviziviso izvo inowanzo gadzira mushure mekutanga kwechigadzirwa chitsva mune chero nyika dzatove kutengeswa uye ichi chingave chimwe chezvikonzero chekutengesa kwayo kwakaderera, sekureva kweET Tech. Chikonzero chikuru chekutengeswa kwepasi zvirokwazvo chiri mumutengo, nekuti iyo 16 GB modhi yeiyo iPhone SE inogona kuwanikwa pamadhora mazana matanhatu, uye neUS $ 600 zvimwe tinogona kuwana iyo iPhone 100 yeiyo yakafanana chinzvimbo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple skates muIndia neiyo iPhone SE
"Sezvo iyo 16 GB modhi yeiyo iPhone SE inogona kuwanikwa ye $ 600"
Iyo yekutanga "chii" ini ndinofunga yakatsvedza mukati, uye sekuziva kwangu iyo iPhone SE yaive $ 400, handiti?
kwaziso nekutenda nekuda kwemashoko, ko bump yeApple.
MuIndia, mutengo weiyo 16GB iPhone SE iri $ 600.
MuMexico, iyo iPhone 5 SE ye64 GB inodhura 635 USD.
Ndo maIndia aya here ...
Cellebrite inoti yave padyo nekutsemura iPhone 6